Ambongadiny XGEAR 2 in 1 Foldable Camping Lounge Seza miaraka amin'ny Detachable Side Table ho an'ny Camping Fishing Beach sy Picnics Manufacturing and Factory |XGEAR
XGEAR Pop Up Canopy lay 10′x10′, mora S...
XGEAR 2 ao amin'ny 1 Seza efitra fisakafoana azo aforitra miaraka amin'ny latabatra azo esorina ho an'ny tora-pasika fanjonoana sy picnics.
XGEAR 2 in 1 FoldafakaSeza filasianadia natao manokana miaraka amin'ny latabatra azo alaina izay azo apetaka amin'ny tongotra ary azo esorina mora foana ho latabatra.Izany dia amulti-miasaseza fisakafoana,miasa tsy ho fanaka patio ihany fa ho fitaovana ilaina amin'ny fitsangatsanganana lasy, andro iray eny amoron-dranomasina, na ho an'ny jono.Aorian'ny asa mafy iray andro, tsy misy toy ny miala sasatra ao amin'ny lavarangana iray voalamina tsara sy tena mahazo aina.XGEAR2 in1Aforetoafaka Camping fandraisam-bahinyNy seza dia ahafahanao mandry ary mahatsapa saika tsy misy tsindry amin'ny hozatrao sy ny tonon-taolanao.
● Famolavolana tokana:XGEAR 2 ao amin'ny 1 seza fatoriana camping dia misy fipetrahana tongotra azo ovaina ho latabatra sisiny.Ahodino ny bokotra eo amin'ny farany ambany & ambony, ny latabatra dia mora misaraka.
● Faharetana:Miaraka amin'ny rafitra vy mafy orina sy harato lamba oxford 600D mateza, ny seza fitobian'ny XGEAR avo lenta dia mahazaka 300lbs lanja.Ny tongotra fingotra anti-slip dia miantoka ny fijoroana mafy.
● Fametrahana lamosina azo ahitsy:Ny haavon'ny lamosina dia azo amboarina miakatra sy midina amin'ny toeran-droa mitongilana mba hanomezana filana samihafa.Rehefa manitsy ny 90 ° ianao dia mety amin'ny famakiana, asa na fanoratana;Mitongilana 145 ° dia manome fihetsika sy zoro tsara indrindra ho anao hankasitraka ny lanitra feno kintana romantika.
● Fampiononana fanampiny:Ny seza lasy XGEAR dia misy ondana azo esorina mba hialana sasatra tsara kokoa.Ny fitoeran'ny kaopy sy ny paosin'ny sisiny dia manome toerana fitehirizana ny entana manokana.Ny habe mivelatra dia 59"LX 21"WX 30"H izay midadasika kokoa noho ny seza miforitra fototra hafa, afaka mahazaka olona hatramin'ny 185CM ny haavony, ka azo antoka fa afaka mipetraka tsara ianao.
● Mora apetraka sy entina:Tsy ilaina ny fivoriambe, miaraka amin'ny endrika miforitra, mivelatra fotsiny ary efa vonona ny seza.Ny rafitra vy mafy orina dia azo aforitra amin'ny habe kely ho an'ny fitehirizana tsotra .Famolavolana maivana miaraka amin'ny kitapo soroka mateza entina am-pilaminana.Tonga lafatra amin'ny hetsika ivelan'ny trano, toby, fanjonoana, tora-pasika, fetibe, zaridaina, fitsangatsanganana, picnic.
Fitaovana fototra Maharitra 600D oxford lamba harato
endri-javatra 2 amin'ny 1 Functionality
loko Grey/ Manga
Item refy L7.48 x W11.8 x H35.43 santimetatra
Lanja entana 6KG
Haben'ny baoritra L7.5x W12 x H35.45 santimetatra (1pcs/boaty)
Carton Weight Gross 7KG
More misy loko azo isafidianana:
● Vita amin'ny frame mafy sy lamba oxford mesh 600D mifoka rivotra sy mateza.
● Ny seza aoriana dia mamela ny rivotra.
Aforitra sy azo entina:
● Mora ampiasaina.Aforeto ary avela ho ao anatin'ny segondra.
● Azo aforitra amin'ny habe kely mba ho mora entina sy mitahiry.
2 amin'ny 1 Fampiasa maro samihafa:
● Toe-tongotra azo esorina izay afaka miova ho latabatra sisiny.Milalao karatra na mametraka solosaina finday & snack eo amboniny.
● Ny fitoeran-tongotra dia azo ampiasaina ho seza faharoa izay mahazaka hatramin'ny 300 lbs.
teo aloha: 600D Saron'ny sambo tsy tantera-drano miendrika sambo V-Hull Tri-Hull fanjonoana Ski Pro-Style Bass Boats
Manaraka: Seza siny roa tone captains Atsipazo ny seza sambo
XGEAR Lay douche maivana sy mafy orina...
XGEAR Pop Up Canopy lay 10′x10′, E...
XGEAR Padded ambony lamosina azo aforitra seza lasy w...
XGEAR seza ambany maivana miforitra tora-pasika seza ...
XGEAR Mesh Ecran Rindrina misy zipper ho an'ny 10&#...
XGEAR Pop Up Fametrahana mora 6 lafiny Hub Screen Ho...